विश्व कार बजार : कसको भाग कति ? | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय विश्व कार बजार : कसको भाग कति ?
विश्व कार बजार : कसको भाग कति ?
काठमाडौं (अस) । विश्वमा रहेका सबैभन्दा ठूला कार निर्माताहरूले सन् २०१७ को कार विक्रीको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै छन् । आधिकारिक रूपमा शीर्ष स्थानमा को आउँछ त भन्ने कुरा कौतूहलको विषय हुन सक्छ । सन् २०१६ मा जापानी कार निर्माता टोयोटालाई उछिनेर शीर्ष स्थानमा आएको जर्मन कम्पनी फक्सवागन ग्रूप नै पहिलो हुन्छ वा कुनै नयाँ कम्पनीले फड्को मार्छ ? अथवा अमेरिकी कम्पनी टाइटन र जनरल मोटर्स पुनः मैदानमा आउने हुन् ? यसको उत्तर कारनिर्माता कम्पनीहरूले विश्वव्यापी विक्री सङ्ख्यामा के राखेका छन् र कारलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर छ ।
यो वर्षको कार कम्पनीको प्रमुख दाबेदार रेनो–निशान–मित्सुबिशी एलायन्स रहेको छ । जापानी कम्पनी मित्सुबिशीलाई फ्रान्सेली ग्रूपले सन् २०१६ स्वामित्वमा लिएको थियो भने हालको नाम उसले गतवर्षको सेप्टेम्बरबाट अपनाएको हो ।
डेसिया, ड्याट्सन, इन्फिनिटी र रेनो सामसुङ मोटर्सजस्ता १० ओटा ब्राण्ड यसमा छन् । गतवर्ष कम्पनीले १ करोड ६ लाख १० हजार ओटा प्यासेञ्जर र हल्का व्यावसायिक सवारीको विक्री गरेको बताएको छ । यससँगै ऊ विश्वको शीर्ष अटोमोटिभ ग्रूप बनेको थियो । तर, फक्सवागनले गतवर्ष आफूले १ करोड ७ लाख ४० हजारओटा सवारी विक्री गरेको बताएका कारण यस अभिव्यक्तिमा केही गडबडी रहेको बताइएको छ । विश्वको कुल कार विक्रीका आधारमा को शीर्ष स्थानमा रहन्छ भन्ने कुरा कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन खोजिएको हो, त्यसमा निर्भर रहने लण्डनस्थित बीएमआई रिसर्चका अटोमोबाइल्स प्रमुख एन्ना मारी बेइसडेनले बताएकी छन् ।
केही सञ्चार माध्यमले रेनो–निशान–मित्सुबिशी एलायन्सलाई गतवर्ष सबैभन्दा धेरै हल्का सवारी विक्री गर्ने कम्पनीको रूपमा राख्नुपर्ने र फक्सवागनलाई दोस्रो स्थानमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । तर, यसो गर्दा फक्सवागनले विक्री गरेका ट्रक र बसलगायत ठूला सवारीको सङ्ख्याको भने बेवास्ता हुने केहीको तर्क छ । तर, फक्सवागनले आफ्नो विश्वव्यापी विक्री सङ्ख्यामा ठूला सवारीलाई पनि समावेश गरेको छ । त्यसकारण यी सबैको विक्री सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने ऊ शीर्ष स्थानमा आउनुपर्ने अन्यको तर्क छ ।
तर, कारनिर्माता र राष्ट्रहरूले हल्का तथा ठूला सवारीको व्याख्या गर्ने अलगअलग तरीकाले भने अझै अन्योल थपेको छ । उदाहरणका लागि एसयूभी (स्पोर्ट्स युटिलिटी भेहिकल)लाई लिन सकिन्छ । यसलाई के भनेर व्याख्या गर्ने ? यो हल्का ट्रक हो या कार ?
एसयूभी धेरै लोकप्रिय बनेको छ र अधिकांश एसयूभी सामान्य कारजस्तै छन् । तर, अमेरिकामा केही एसयूभीलाई हल्का ट्रकका रूपमा लिइन्छ । सिङ्गापुर, मलेशिया, र थाइल्याण्डमा टोयोटाको हिलक्सलाई पिकअप ट्रक वा हल्का व्यावसायिक सवारी साधनका रूपमा लिइन्छ । उता, टोयोटा फर्च्युनरले पनि उस्तै कार उत्पादन गर्छ, तर यसलाई एसयूभी प्यासेञ्जर कारको नाम दिइएको छ । प्यासेञ्जर कारको अन्त्य कहाँनिर हुन्छ र हल्का सवारीको शुरुआत कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न कठिन रहेका कारण भ्रम झनै बढेको हो । तर, सबै ब्राण्डहरूले गतवर्षको कुल कार विक्रीको ‘ब्रेकडाउन’ गरेका छैनन् र सबै कार ब्राण्डहरूले प्यासेञ्जर कार तथा हल्का सवारीबारे स्पष्टसँग व्याख्या पनि गरेका छैनन् ।
यसको समाधानको कुरा गर्ने हो र ठूला ट्रक तथा बसहरूलाई विक्री सङ्ख्यामा नराख्ने हो भने हल्का सवारी बजारबीच मात्र तुलना गर्न सहयोग पुग्छ । यो उपाय औसत उपभोक्ताका लागि बढी उपयोगी हुन सक्छ र यसले रेनो–निशान एलायन्समाथि आउने सम्भावना बढाउँछ । तर, यदि हरेक ब्राण्ड र विक्री भएका हरेक प्रकारका सवारीलाई समूहमा राख्ने हो भने यसले फक्सवागन अगाडि आउने सम्भावना बढाउँछ ।